" जन्मेपछि मानिसले मृत्युसँग हार्नै पर्छ । तर कतिपय मानिसहरू मृत्युसँग हारेर पनि जिउँदै हुन्छन ।" यो सत्यलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं । कतिपय बेला मानिसले मृत्यु स्विकार्न कठिन हुन्छ । सायद त्यो मृत्...
वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षित रहेनन् !
काठमाडौं । वरिष्ठ साहित्यकार मदनमणि दीक्षितको ९७ वर्षको उमेरमा आज(बिहिबार) निधन भएको छ । उनलाई मुटु, मिर्गौला र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या थियो । पत्रकार कनकमणि दीक्षितले ट्विट गर्दै दीक्षितको निधन ...
गजल-मुटु भित्र कहिल्यै पनि स्वार्थी दिप बाल्ने छैन
विकासको बिरुद्धमा कलम मत चाल्ने छैन । मुटु भित्र कहिल्यै पनि स्वार्थी दिप बाल्ने छैन । हातमा कडी भिडाएर लिएपनि जेलमा थुन्न, मुल्य चुक्ला जीन्दगीको शान्तिलाई ढाल्ने छैन । ...
नृपेन्द्रले कविन्द्रलाई कल गर्यो र भन्यो, “हेलो कविन्द्र हेर न ! मैले त विहे गरें , तिमीहरू कसैलाई खवर गर्न पाइन् ।" “मन नदुखाओ है । त्यस्तै पर्यो ।" कविन्द्र नृपेन्द्रको कुरा सुनेर छ...
सुनको खोजीमा बालककाल बित्यो हजुर लुकामारी खेल्दै गोठालोमा डण्डिबियो हुच्चिलौरी खेल्दै उमेर छदै कमाइ मैले गर्नु पर्छ भन्दै लागे म त भोट तिर सुन पाइन्छ भन्दै । हिम नदीका चिप्ला ढुङ्गा होस राखी तर्द...
बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको इमेल !
बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायणको इमेल आगे प्यारा सन्ततिहरु ससाना रुमालहरु जोडेर एक थान नेपाल बनाएको थिएँ त्यसलाई कस्तो छ अहिले? सन्चो छैन सुनिरहेछु देशलाई कस्तो छ अहिले? यता आएका आत्माहरु खासख...
लघु कथा - बैठक " ल बैठक शुरू गरौं ! " " कति कुर्नु , साथीहरूको तरीका देख्दा पनि छक्क लाग्छ ।" " तोकेको समयमा साथीहरू कहिल्यै नआउने भए । " श्रवणकुमारले सासै नरोकि सचिवतिर फर्केर भनें । दिवाकर...
गजल-प्रदेशबाट फर्कि आउने आस छैन आमा !
ऋण लागेर स्वदेशमा बास छैन आमा प्रदेशबाट फर्कि आउने आस छैन आमा रात भरि गन्थन गर्दै संगै सुत्या साथी विउँझिदा त विस्तरामा स्वास छैन आमा खै कसरी सक्काउने हो ऋण तिरेर अब कमाई पनि खाडी मुलुक खासै ...
साउनको सोमबार !
लघु कथा : साउनको सोमबार सुनिताले अफिसको टेबुल भरि हरिया र पहेँला रङ्गका चुराहरू राखेर बसी रहेकी थिइन् । थाममा उभिएर भित्र छिरेकी अनिताले हेर्दै हाकिमकोमा पसिन र टक्क उभिइन । उभिएको एकैछिनमा रामवि...
लघु कथा -- चुनाव द्वन्द्व र पिडाले छट्पटीएको शिवराम निकै लामो समय अगीदेखि विदेशीएका थिए । दलिय सहकार्य र गठबन्धनको राजनीति प्रयासले दलिय सहकार्य भएकै कारण देशको व्यवस्था र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन ...
विसंगत ! क्रमश: क्रमश: एक हुल मान्छेहरू आएर हेर्दै गए पालैपालो प्रदर्शनीमा राखिएका पोट्रेटहरूलाई र फर्किदै गए उसैगरी क्रमश: चुपचाप , चुपचाप जब बाहिर निस्कने ढोकाको छेउनेर टाँसिएको अन्त...
लघु कथा - पतिपत्नी रेणु चौरस्तामा उभिएकी थिइन् । शनिदेवले रेणुको छेवैमा गएर भने, "रेणु के छ त ? तिम्रो खवर ? आजकाल अधिकार लागेको छैन ? निकै फुर्सदमा उभिएकी छौ त ? " "शनि तिमीले के भन्न खोजेको हँ ?...
चिहान सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, इट्टा, ब्लक, रोडाले बनेका यि अग्ला होचा चिहानहरूमा निदाईरहेछन मुर्दाहरू निस्किएर चिहानबाट तर्साइरहेछन् मानवता देखाएर धर्म, जात, लिङ्ग, रंगका डरलाग्दा विभेदी अनुह...